Hurumende yakagona: N’anga | Kwayedza
Hurumende yakagona: N’anga
09 Jan, 2021 - 15:01	 2021-01-09T15:30:00+00:00 2021-01-09T15:30:00+00:00 0 Views
MUTUNGAMIRIRI wesangano rinomiririra varapi vechivanhu nevemachechi, reZimbabwe National Practitioner’s Association, Sekuru Friday Chisanyu, vari kurumbidza danho rakakatorwa neHurumende rekuti magungano anosanganisira emachechi nemichato zvimbomira kuitwa kwemazuva 30 nechinangwa chekuedza kumisa kutapurirana nekupararira kwechirwere cheCovid-19.
“Hongu, zvinogona kurwadza vanhu vazhinji kuti vanga vachangopinda mumwedzi waNdira nekudaro homwe dzanga dzakatsva nekuda kwe’January Disease’. Chakakosha upenyu neutano nekuti kana vanhu vakarwara nyika haiite budiriro nekudaro kudzivirira kuri nani pane kuzorapa chirwere chacho uye hachisati chava nemushonga unochirapa,” vanodaro Sekuru Chisanyu.
Vanoyambira vemachechi nen’anga kuti vambomira kuita zvirongwa zvinoda kuungana kwevanhu.
“Kana mukaona Hurumende yotora matanho akadai, hazvirevi kuti ine utsinye nevanhu, kwete. Kuzama nzira dzose dzingaita kuti vanhu varambe vari vapenyu.
“Chirwere cheCovid-19 chinouraya, ndokusaka zvichinzi vanhu vambogara kumba nekuti mukufamba-famba vanhu vachiita mabasa akasiyana nehuwandu hwavo ndimo mukutekeshera kwacho chozonetsa kudziviririra,” vanodaro.
Mumwe murapi wechivanhu wekuChitungwiza, Sekuru Peter Maponda, vanoti vakapihwa magirovhosi nemasanitizer nebazi rezveutano nekurerwa kwevana ekushambidza maoko evanhu vanoenda kumatare avo vachinotsvaga kubatsirwa.
“Hakuchina nyaya dzekukwazisana uye tinotarisa kudziya kwemuviri munhu asati apinda mumatare edu zvekuti kana tichinge taona kwakanyanya tinomutumira kune chikwata cheRapid Response Team kuti abatsirwere nenguva,” vanodaro.